सीमालाई नेपालीहरुले कस्तो हालत गर्ने रेछन् ? भिडियोमा हेर्नुहोला – Complete Nepali News Portal
सीमालाई नेपालीहरुले कस्तो हालत गर्ने रेछन् ? भिडियोमा हेर्नुहोला
June 29, 2017	1,929 Views
झापा । दार्जिलिङका सुवास घिसिङले ८० को दशक प्रारम्भमा गोर्खाल्यान्ड अन्दोलन सुरु गरे। तर २२ अगस्ट १९८८ मा भएको भारतको केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र सुवास घिसिङका बीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता र २३ अगस्ट १९८८ को भारतको केन्द्र सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रपछि आन्दोलन स्थगित भयो। यो स्थगनलार्इ भारत र नेपालमा ख्याति कमाइसकेका धेरै लाल बुझक्कडहरुले चरमोत्कर्षमा पुगेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलार्इ सदाका लागि समाप्त भएको अर्थ लगाए। सायद अब यो कुरा थाहा नहुने नेपालीहरु सायद कमै होलान ,भारतीय एक युवती सिमा सुबेदीको काण्डको बारेमा ।
उनले गोर्खा ल्याण्डको बिषय लिएर नेपाल र नेपाली हरुको धेरै बेइजत गरेको छिन् । सधै सामाजिक संजालको प्रत्यक्ष्य प्रसारनमा आएर उनले अफबाह फैलाउदै आएकोले धेरै नेपाली हरुले उस्को घमण्ड हटाउन लागि परेको छन् । उनले प्रत्यक्ष्य प्रसारणमा कैले नेपाल आएछैन त कैले आफुले लगाएको लुगा समेत खोलेर चर्चा परि चर्चामा आइरहेको हल्ला छन् ।सीमाको बारेमा एउटा नेपाली छोटो चलचित्र निर्माण भएको छ ।
नेपाली छोटो चलचित्र “सीमाको विरुद्ध “को निर्माण झापाको दमकमा भएको हो ।यो छोटो चलचित्रमा दिपक राज जोशी ,शिशिर बुढाथोकी ,सर्बज्ञान कोइराला र राजन बुढाथोकीको अभिनय छ भने अवधारणा सिसिर बुढाथोकीको रहेको छ साथै यो चलचित्रको निर्देसन ज्ञानेन्द्र कोइरालाको रहेको छ ।